5 ဥရောပမှာတော့ညရထားစီးအကြောင်းရင်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့ညရထားစီးအကြောင်းရင်းများ
ဥရောပနေ့ချင်းညချင်းအိပ်ပျော်ရထားတစ်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိမျိုးစိတ်တစ်ခုခုဖြစ်လာကြပြီဖြစ်သော်လည်း (အကြှနျုပျတို့သညျမှာရှာကြသည်ဘတ်ဂျက်လေကြောင်းလိုင်း!), ရထားချစ်သူများ နေဆဲတက်ပေးခြင်းမရှိပါ! အဆိုပါစိတ်အားထက်သန်ရထားချစ်သူများများအတွက်, ဘာမျှမ beats ညဥ့်ရထားတစ်စီးဖွယ်ရှိနေသည်နှင့်များ၏အလှအပခံစား ရှည်လျားသောအကွာအဝေး သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဦးတည်ရာကိုရဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့မလိုဘဲ.
သငျသညျပြည်ပမှာတညဉ့်မီးရထားခရီးစဉ်စီစဉ်ပေမယ့်ညဥ့်ရထားကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ကြောင်းသေချာမသိကြပါတယ် အကယ်., အောက်ကကိုဖတ်ကြဘူး.
မှတ်စု: ကျနော်တို့အတူတူထားပြီးပြီအကြောင်းရင်းများအားလုံးကို "င်ဘို့ထက်ကျော်လွန်သွားပါ, သငျသညျကိုမဖြုန်းပါလိမ့်မယ် 10+ နာရီသင်၏ခေါင်းကိုရထားပြတင်းပေါက် "ဆန့်ကျင် jiggles အဖြစ်သင့်ပခုံးပေါ်မှာ drooling.
ဘတ်ဂျက်အပေါ်တိုင်းခရီးသွားများအတွက် (အစားဒဏ်ငွေပန်းကန်များနှင့်ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအပေါ်ပိုပြီးသုံးဖြုန်းချင်ပါတယ်တဲ့သူသို့မဟုတ်သူတို့အားသူတို့တစ်တွေလက်မှတ်ပေါ်တွင်အလိုတခုတည်းထက်), ညဥ့်ရထားများအတွက်ရွေးချယ်ဖို့အများဆုံးဘတ်ဂျက်-ဖော်ရွေ option ကိုဖြစ်ကြသည် (အထူးသဖြင့်တစ်ဦးတိုးချဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်). သင်တစ်ဦးဟိုတယ်သုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုညကိုအစားထိုးသည့်အခါသင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တစ်ဝက်တွင်ဖြတ်မြျှောလငျ့နိုငျ (ပင်တစျေးနှုန်းချိုသာကဏ္ဍ) ရထားပေါ်တွင်ည၏တူညီသောအရေအတွက်သည်နှင့်အတူ, အကြောင်းကိုဖွင့်ချွေ $500! ကြောင်းစမတ်ဘတ်ဂျက်မရင့်ခဲ့လျှင်, ကျနော်တို့ကဘာလဲဆိုတာမသိရပါဘူး!
ညရထားအတွက်အချိန်စွမ်းရည် & သက်သာခြင်း
မီးရထားခရီးသွားလာ၏ထိရောက်မှုကိုငြင်းဖြစ်ပါသည်! ဥရောပရထားအစာရှောင်ကြသည်, စည်းရုံးနှင့်မျှမကိစ္စကိုသင်လျှင်သင်တစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး option ကိုအတွက်ရှာဖွေနေကြသည်အရာအားလုံးကို အီတလီနဲ့တူအနီးကပ်တစ်နေရာမှခရီးသွားလာ ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဦးတည်ရာ. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြသည့်ခရီးစဉ်ရုံးမှာလိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရှာနေသူလူတိုငျးအတှကျစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်, သူတို့၏ အကြိုက်ဆုံးပြတိုက် ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့သွားကြဖို့စီစဉ်ထားချင်ပါတယ်. ညဥ့်ရထားသင်အမှန်တကယ်ညဥ့်အချိန်ကာလအတွင်းအချို့သောကြွင်းသောအရာရရန် option ကိုပေး. ထိုအခါပြတင်းပေါက်ကနှင့်ရထားမှတ်တိုင်များစဉ်အတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရှုခင်းကိုခံစားဖို့နေ့ခင်းဘက်ကိုသုံးပါ.
Reggio Calabria မီလန်ရထားမှ
ရုံပုံမှန်ရထားနဲ့တူ, ညဥ့်ရထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုလ်များအတွက်အကောင်းဆုံးနယျလှညျ့ option ကိုဖြစ်ကြသည်. သူတို့လေယာဉ်လုပ်ပေးထက်ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင်ဝေးလျော့နည်း CO2 ထုတ်လုပ်ကတည်းက, သူတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အနာဂတ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. ဒါကြောင့်, သငျသညျလျှင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတိ, သငျသညျယခု မှစ. ခရီးသွားပါလိမ့်မယ်အဘယ်သို့သောလမ်းသင်သိ.
la Spezia တူရင်ရထားမှ
ညဥ့်ရထားသူငယ်ချင်းများ Making အဘို့ကြီးသောများမှာ
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် တစ်ဦးတည်းခရီးသွား, ရထားသင်ဥရောပတစ်ဝှမ်းမှလူများတွေအများကြီးဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်အားလုံးကွဲပြားခြားနားသော. အနည်းငယ်ဆင်တူအကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ရှာမည်, သငျတို့သအလားအလာအသက်အဘို့အမိတ်ဆွေများကိုလုပ်ပြီးပြီ! Plus အား, ပတ်ပတ်လည်ဤအချိန် ပို. ပင်အရေးကြီးသောအဘယ်အရာကိုဖွင့် (အနည်းဆုံးခေါင်းစဉ်ငါတို့သည်ပေါ်မှာဆိုရင်), သငျသညျလုံခြုံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောလူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အခန်းဝေမျှဖို့! ညဥ့်ရထားအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျဘက်ကိုသင်ဆိုးဆိုးရွားရွားဟောက်တတ်တဲ့သူတွေကိုတစည်းနှင့်အတူတဲထဲမှာအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်, နံစော်သောအနံ့ (တောင်းပန်ပါတယ်!) သို့မဟုတ် ... ရုံတွေအများကြီးချောင်းဆိုး. ဒါကြောင့်, တူညီသောကျဉ်းကျုတ်အခန်းတစ်ဦးချက်တင်အဘို့ကြီးသောရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဦးအနည်းညရှာဖွေတာစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်!
ဝိုး, ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလှပသောညရထား၏အကျိုးကျေးဇူးကိုထည့်သွင်းရန်မေ့လျော့နေကြသည် – ဇါတ်စင်နှင့်ဆိုင်သော အယူခံဝင်! Fjords မှတစ်ဆင့်အိပ်မနေပါနဲ့, အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်း, နှင့်အခြားအလားတူလှပသောရှုခင်း. သငျသညျဂျာမဏီရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဗဟိုသွားတော်အဖြစ်ဒါပေမယ့်နိုးနေဖို့မညျ့တာဝနျရှိမခံစားရဘူး, ဖြစ်စေ. Oh, နှင့် - ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပါ, ကသာပြတင်းပေါက်ကဖွင့်လျှင်ပင်!
ကျွန်တော်တို့ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကို tweeting အားဖြင့်သိပါစေ @SaveATrain! , သငျသညျ၏အောက်ခြေပေါ်မှာငါတို့ကအခြားလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Save-A-ရထား နှင့်သင်တန်း, သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှအမိန့်နိုင်ပါတယ် ရထားလက်မှတ်တွေ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-reasons-night-trains/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ည #trainlovers ရထား ရထားခရီးသွား travelgermany travelitaly traveltips